प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै फेरी शक्तिशाली बम विस्फोट, ९ जनाको मृत्यु, के भन्छ प्रहरी ? – Hamrosandesh.com
प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिँदै फेरी शक्तिशाली बम विस्फोट, ९ जनाको मृत्यु, के भन्छ प्रहरी ?
पाकिस्तानको लाहोरस्थित सूफी मुसलमानहरूको एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक स्थलबाहिर बुधवार बिहान भएको विस्फोटनमा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको र दुई दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिहरू घाइते भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
पाकिस्तानको पन्जाब प्रान्तका प्रहरीका अनुसार प्रसिद्ध दाता सुफी दरगाहनजिकै प्रहरीको एउटा गाडीलाई तारो बनाएर सो आत्मघाती आक्रमण गरिएको थियो।
मृत्यु हुनेमा पाँच सुरक्षाकर्मी पनि भएको बताइएको छ। पाकिस्तानी तालिबानबाट फुटेर बनेको हिजबुल अहरर समूहले आफूले सो विस्फोटन गराएको दाबी गरेको छ। इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको पवित्र रमजान महिना सुरु भएपछि यो साङ्घातिक आक्रमण भएको हो।
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। पाकिस्तानको दोस्रो ठूलो सहर लाहोरमा अवस्थित दाता दरबार दरगाह दक्षिण एशियामा भएका पुराना दरगाहमध्ये एउटा हो। त्यहाँ शिया र सुन्नी दुवै सम्प्रदायका मानिस तथा गैरमुस्लिमहरू पनि दर्शन गर्न जान्छन्।
यो दरगाहको निर्माण एघारौँ शताब्दीमा भएको हो। सर्वप्रथम गजनवी राजा सुल्तान जकिरुद्दिन इब्राहिमले यसको निर्माण गराएका थिए। त्यसपछि धेरै चोटि यसको विस्तार भएको छ। यहाँ सूफी सन्त अबुल हसन अली हज्वेरी अर्थात् दाता गन्ज बक्शको समाधि छ।
भारत विभाजन हुनुभन्दा पहिला सो दरगाहमा सयौँ वर्षदेखि हिन्दूहरू पनि जाने गरेका थिए। सन् २०१० मा सो दरगाहमा भएका दुई आत्मघाती विस्फोटनमा दर्जनौँ मानिसहरूको ज्यान गएको थियो।
प्रहरी के भन्छ?
पाकिस्तानको पन्जाब प्रहरीका प्रमुख आरिफ नवाजका अनुसार यो प्रहरीप्रति लक्षित आत्मघाती आक्रमण थियो। सञ्चारमाध्यमलाई उनले भने, “प्रहरीलाई तारो बनाएर यो आक्रमण गरिएको हो। उनी (आक्रमणकारी) जताबाट आएका थिए त्यता धेरै क्षति पनि हुन सक्थ्यो।”
इस्लाम धर्मअन्तर्गत भए पनि सूफी सम्प्रदाय अनुसरण गर्ने मानिसहरूलाई कट्टरपन्थी लडाकुहरूले आक्रमण गर्ने गरेका छन्। कट्टरपन्थीहरू सूफी सम्प्रदायलाई इस्लामविरोधी मान्छन्। तर आक्रमणकारीले प्रहरीको गाडी भएको ठाउँमा आएर विस्फोटन गराएको उनले बताए।
सबै निकायले प्रमाण जुटाउन थालेको उनले बताए। प्रहरीका अनुसार दरगाहमा खतरा थिएन। तर उसले रमदानको महिनामा त्यहाँ आउने दर्शनार्थीलाई सतर्क हुन भनेको छ।
सन् २०१४ मा तालिबानले पेशावरस्थित विद्यालयमा आक्रमण गर्दा १४१ जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि पाकिस्तानले अतिवादी लडाकु समूहविरुद्ध कारबाही सुरु गर्‍यो। अहिले सुरक्षास्थितिमा सुधार आए पनि देशमा लडाकु समूहहरू सक्रिय छन्। सन् २०१६ मा लाहोरमा इस्टर पर्व मनाउन भेला भएका इसाईहरूलाई लक्षित एउटा विस्फोटनमा कम्तीमा ७२ जनाको मृत्यु भएको थियो।
यस्तै पाकिस्तानमा धर्मनिन्दाको आरोपमा मृत्युदण्ड पाएर सात वर्ष जेल बिताएकी इसाई महिला आसिया बीबीले देश छाडेको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्। गत वर्ष त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले आसिया बीबीविरुद्धको फैसला उल्टाइदिएको थियो।
छिमेकीसँगको भनाभनका क्रममा पैगम्बर मुहम्मदको अपमान गरेको आरोपमा सन् २०१० मा उनलाई दोषी ठहर गरिएको थियो। पाकिस्तानलाई ध्रुवीकृत गरेको सो घटनामा आसिया बीबीले आफू निर्दोष भएको बताउँदै आएकी छन्।
देश छाडेर आसिया बीबी कहाँ र कहिले गइन् भन्नेबारे पाकिस्तानी अधिकारीहरूले केही खुलाएका छैनन्। तर उनका वकिल सैफ उल मलूकले आसिया बीबी आफ्ना दुई छोरीले शरण पाएकै देश क्यानाडा पुगेको बीबीसीलाई बताए। देशबाहिर पठाउने चाँजोपाँजो मिलाइँदै गर्दा सामान्यतया आसिया बीबी भनेर चिनिने आसिया नोरीनलाई गोप्य स्थानमा राखिएको थियो।
गत अक्टोबरमा आसिया बीबीविरुद्धको फैसला उल्टाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि धर्मनिन्दासम्बन्धी कानुनको समर्थन गर्ने कट्टरपन्थीहरूले हिंसात्मक प्रदर्शनहरू गरेका थिए भने उदारवादी तप्काले रिहाइको माग गरेका थिए।
आसिया बीबीमाथि के आरोप थियो?
सन् २००९ को जुन महिनामा महिलाहरूको एउटा समूहसँग आसिया बीबीको भएको विवादबाट मुद्दा जन्मिएको थियो। ती महिलाहरूले फलफूलबारीमा काम गरिरहेका बेला एक बाटा पानीको विषयलाई लिएर विवाद शुरू भयो।
आसिया बीबीले एउटा कप प्रयोग गरेकोले उनको धर्मका कारण त्यो अशुद्ध हुन पुगेको र आफूले त्यसलाई प्रयोग गर्न नसक्ने ती महिलाहरूले भने। अभियोजनकर्ताहरूका अनुसार विवादपछि ती महिलाहरूले आसिया बीबीलाई धर्म परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए र त्यसको जवाफ दिने क्रममा उनले पैगम्बर मुहम्मदबारे अपमानजनक टिप्पणी गरिन्।
त्यसपछि उनको घरमा उनीमाथि कुटपिट गरिएको थियो र त्यसबेला उनले गल्ती स्वीकारेकी थिइन्। प्रहरीले गरेको एउटा अनुसन्धानपछि उनलाई पक्राउ गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उनलाई सफाइ दिँदै उक्त मुद्दा भरपर्दो प्रमाणमा आधारित नभएको र “ज्यान मार्ने धम्कीका कारण” भीडसामु उनले गल्ती गरेको स्वीकारेको बतायो।
इस्लाम पाकिस्तानको राष्ट्रिय धर्म हो र त्यसले त्यहाँको कानुनी प्रणालीलाई समर्थन गर्छ। धर्मनिन्दासम्बन्धी कडा कानुनको पक्षमा जनताको समर्थन रहिआएको छ।
आफूप्रतिको समर्थन बढाउने एउटा माध्यमका रूपमा कडा धारका राजनीतिज्ञहरूले धर्मनिन्दामा कठोर सजाय दिइनुपर्ने कुरालाई प्रायः समर्थन गर्दै आएका छन्।
तर आलोचकहरू भन्छन्, धर्मनिन्दासम्बन्धी कानुनलाई व्यक्तिगत विवादमा रिस-इवी साध्नका लागि प्रयोग गर्ने गरिएको छ र कमजोर प्रमाणका आधारमा दोषी ठहर्‍याउने गरिएको छ।
दोषी पाइएकामध्ये अधिकांश मुस्लिम अथवा अहमदी समुदायका छन् जो आफूलाई मुस्लिम नै ठान्छन्, तर रुढिवादी मुस्लिमहरूले उनीहरूलाई अल्लाहमा विश्वास नगर्ने समुदाय ठान्छन्।
सन् १९९० को दशकयता कैयौँ इसाईहरू पनि धर्मनिन्दाको आरोपमा दोषी ठहर भएका छन्। उनीहरूको जनसङ्ख्या १.६ प्रतिशत छ। पछिल्ला वर्षमा इसाई समुदायलाई निशाना बनाई कैयौँ आक्रमण भएका छन्। सन् १९९० यता ईशनिन्दाको आरोपमा कम्तीमा ६५ जना मारिएका छन्।
सन् १९७१ मा जन्मिएकी आसिया बीबीका चार सन्तान छन्। धर्मनिन्दाको आरोपमा मृत्युदण्ड पाउने उनी पहिलो महिला हुन्।बीबीसी